एकाबिहानै भालेश्वर मन्दिरको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज - satkar post
एकाबिहानै भालेश्वर मन्दिरको दर्शन गरी जान्नुहोस् तपाईंको आज
मंसिर २०, २०७६ मा प्रकाशित
आज वि.सं. २०७६ साल मंसिर २० गते शुक्रबारको राशिफल इ.स. २०१९ डिसेम्बर ६, ने.सं. ११४० थिंलाथ्व, मार्ग शुक्लपक्ष । दशमी, २९:३६ उप्रान्त एकादशी ।
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) अरूको करकापमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। अव’सरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। छर-छिमेकमा असमझदारी बढ्नेछ। उधारोमा व्यापार गर्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने समय छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने हुन सक्छ। स्वाभिमानका लागि लाभांश छोड्नुपर्ला। आक’स्मिक ख’र्चले मन अत्ता’लिए पनि लामो यात्रा गर्ने अव’सर जु’ट्नेछ। बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) आम्दानीका विभिन्न स्रोत देखिए पनि सोचेको फाइदा नहुन सक्छ। लगानीतर्फ लागत बढ्नेछ। कामको राम्रै मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातपार्न केही समय लाग्नेछ। आफ्नो लाभांशमाथि अरूले दा’बी–वि’रोध गर्न सक्छन्। ई’र्ष्या गर्नेहरूबाट स’जग रहनुहोला। अरूको मुख ता’क्ने बानीले पछि परिनेछ। तापनि पछिका लागि गरिएको लगानीले अवश्यै फाइदा दिनेछ। मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) मिहिनेत गर्दा कार्यसिद्धिको समय छ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुनेछ। व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जु’ट्नाले महत्त्वाकांक्षी काम बन्नेछ। काम गरेर दाम कमाउने अव’सर प्राप्त हुनेछ, कर्तव्यप’रायण रहनुहोला। कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) मिहिनेत परे पनि भाग्यले साथ दिने हुँदा काममा सफलता मिल्नेछ। चु’नौतीहरू ह’ट्नेछन् भने अ’वसर तथा सफलताले पछ्या’उनेछन्। टाढिएका मित्रग’ण नजिकिनाले प्रसन्नता मिल्नेछ। सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ। आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। अ’भाव ह’ट्नुका साथै दाम, नाम र इनाम प्राप्त हुनेछ। धार्मिक अनुष्ठान र सेवामूलक काममा मन रमाउनेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) पहिलेका सम’स्या दोहोरिनाले अ’लमलमा परिएला। गो’पनीयता बाहिरिनाले पनि समस्या आइपर्ने देखिन्छ। खानपानको असा’वधानीले स्वास्थ्यलाई हानि गर्न सक्छ। आम्दानी रोकिनाले केही योजना स्थगन हुन सक्छन्। काम बि’ग्रने भय’ले पनि सताउन सक्छ। तत्काल लाभ उठाउन नसकिए पनि पछिका लागि काम गर्न सकिनेछ। उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला। कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) कामको अव’सर प्राप्त भए पनि भेटघा’ट र शिष्टाचारले अल’मल्याउन सक्छ। सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न व्यवहारमा स’जग रहनुपर्ला। प्रयत्न गर्दा व्यापार बढ्नुका साथै व्यवसायमा लाभ हुनेछ। मित्रता र प्रेमको ब’न्धन क’सिलो हुनेछ। भौतिक सुविधाले ख’र्च नि’म्त्याउन सक्छ। केही विवा’दास्पद कामको जिम्मे’वारी वहन गर्नुपर्ला। बुद्धि पुर्याउन नसक्दा वा’दविवादमा परिनेछ। तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) मिहिनेतीहरूका लागि समय निकै उत्साहजनक रहनेछ। प्रति’स्पर्धामा विजय प्राप्त हुनेछ भने द्वे’ष तथा ई’र्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। चु’नौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने श’त्रुहरू प’रास्त हुनेछन्। व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौ’का छ। चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन्। पढाइलेखाइमा राम्रो प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। सन्तान वा सहयोगीका माध्यमबाट काम बन्ने देखिन्छ। आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ। बौद्धिक प्रति’स्पर्धामा पनि अरूलाई उ’छिन्न सकिनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) परि’स्थितिसँग स’म्झौता गर्नुपरे पनि बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। बे’सुरमा व’चन दिने बानीले सम’स्या नि’म्त्याउनेछ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ भने आफ्ना लागि परि’स्थिति प्रति’कूल रहनेछ। ई’र्ष्या गर्नेहरूले काममा अ’वरोध पुर्याउलान्। आफ्ना सामानमा अरूले दा’बी गर्न सक्छन्। हिस्से’दारसँग असम’झदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौ’ता भं’ग हुन सक्छ। मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) चिताएका काममा बेलैमा योजना बनाएर प्रारम्भ गर्दा फाइदा हुनेछ। प्रति’स्पर्धीहरूले हा’र खा’नेछन् भने काममा मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रै अ’वसर जु’ट्नेछ। साथीभाइले राम्रै सहयोग जुटाउनेछन्। पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। भौतिक साधन जु’ट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ होला। व्यापारमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ । कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) दिन रमाइलो र उत्साहपूर्ण रहनेछ। प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ भने विभिन्न भौतिक साधन जुटा’उने अ’वसर मिल्नेछ। मनग्य धन लाभ हुनाले सोख पूरा गर्न सकिनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फ’राकिलो बन्नेछ। रमाइलो यात्रा गर्ने अ’वसर प्राप्त हुनेछ। प्रेम र मित्रताको ब’न्धन क’सिलाे हुनेछ। मानसम्मान प्राप्त हुनुका साथै सम्मानित कामकाे यश लिने अव’सर छ। मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) चिताएकाे काम बन्नाले नयाँँ काम सुरु हुनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व नि’खार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। कीर्तिमानी कामको यश लिने मौ’का छ। बि’छोडिएका आफन्तसँग भेटघा’ट हुनेछ। व्यापारमा राम्रो फाइदा हुनेछ। साथीभाइको आगमनले दिन मनोरञ्जनपूर्ण हुनेछ। रमाइलो जमघ’ट एवं खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ।